अन्त्यमा कसरी झुके माधव नेपाल ? बानेश्वरको अर्याल होटेलवाट यस्तो घोषणा हुँदै – Kavrepati
Home / राजनिति / अन्त्यमा कसरी झुके माधव नेपाल ? बानेश्वरको अर्याल होटेलवाट यस्तो घोषणा हुँदै
admin August 1, 2021	राजनिति Leaveacomment 198 Views
काठमाडौ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकै अप्ठेरोमा परे पछि अब एमालेमै जाने मनस्थितीमा पुगेका छन् । त्यसका लागि आइतवार उनले बानेश्वर स्थित अर्याल होटलमा आफु पक्षका नेताहरुलाई बैठकका लागि बोलाएका छन् । एमाले एकता कायम राख्न दोस्रो पक्षले गरेको पहलका कारण उनी अप्ठेरोमा परेका हुन् ।
देउवा सरकारमा सहभागी हुन आग्रहका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग उनले आफु एमालेमै मिल्न जान लागेको बताएका छन् ।
मन्त्रालय भागबण्डाबारे छलफल गर्न भन्दै आइतवार उनी कोटेश्वर स्थित नेपाल निवास पुगेका थिए । प्रचण्डलाई नेपालले पार्टी मिल्ने स्थिति बनेकाले सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको जवाफ दिएका छन् ।
Previous आहा ! दमाई केटासग बाहुनि केटिको यसरी भयो बिवाह (हेर्नुस् भिडियो )
Next ७ वर्षपछि आफ्ना श्रीमानको अनुहार देख्न पाएकी श्रीमतीको यस्तो प्रश्न सुनेर उनका श्रीमानले आँखाबाट आँशु झारे र भने ….
काठमाडौं । सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदमा नाराबाजी गरेको नेकपा एमालेकी एक सांसद रोष्टममै उक्लिने प्रयास …